Search the Web maansooyin horudhaca
sawiraanta taariikhda soomaaliya
igala soo xadhiidh
sawiraanta asxaabta xamar daawo dacalada madax weeynayaasha dalkeena soo maray sawiraan sawiraan
caanshaqu ma dhab baa mise
murti iyo maa weelo
gabayada maansooyin hidaha iyo dhaqanka dalkeena
KU SOO DHAWAAW BOGGA MAANSOOYINKA MAANSO Waxaan maansadan isameeyayy gabadh aan wada haasaawi jirnay oo aaday Kambaala dalka Ugaandha mudo markay joogtay ayay ila soohadashay oo igu tiri waan imanayaa waxaa kasoo wareegtay mudo xilgay tidhi waan imaanayaa anigoo quustay ayaan arkay maaln maalmaha kamida wiil aan saaxiibo ahaan jirnay wxuu ii sheegay inuu arkay idman ooy joogto magaalada aan joogo kadib ayaan sameeyay maansadan waxaana tiriyay (12/9/03)
Aday baday kalgaclkaan Inuu igu balaadhoo Igu baaho caashaqu Bohol yaw igaliyoo iga dhigo bukaan socodboogtiisa la ildaran intuu badanka dagaybuu beerkayga kala jaruu baraf uu ku dhaliyee jacayl waa labaabaa caashaq waad kaboodaa hadii lagaaga boodee balo waxay ka joogtaa aan lahayn baxnaanoo aan laga lug bixi karin hadii kalgacayl ku booqdoo wadnahaaga baadhoo kugu baaqiyeeshookugu baaho waa halisxilgaan isbaranaan ka baqaayay inyahay inaad jacaylka baylihin baydgo,iidanbaynoo qosalkaagu beenyahay bishimaha kahooseenwaxaase iibildhaamayayoon kabaydhi waayayna quruxdaadan bilan iyo bina aadminimadaa ay bohoshu hoostaal badan kayga jiiteewaxa,aan labooyaa batarkaad kaboodiyo bololaydaad tumatee briqura kolay tahay idmanbaa ku baylihin ama barashadiinii ayay baal kamariyoo bariidad ladhuumaniwax walboon is barbar dhigo isma oran bilaahiyecaku barasho qaarkeed bulshada ma,unacdaaaar babul waynoo boqolaal qof laayoo horay looga baqayoocidna aan bariinbaan baradiisa galayeeibad baadi boqorkoow xaliyoow jacayl bata khayr lama butaacee wax buu booda saaraasaaxiib barbaartuna intay geed kaboodibay ayay talo kaboodaayebaryahaan naftaydii buuqbaa hadheeyoo dumar taan isbaranee badankayga galiyee aan ubaahi sheegtee ibaxnaani aan dhaho maxay iiga baydhaan ?
markii aan ubalan balobalantana ujabiyaan hoobaan bislaatiyohoodiyo barwaaqiyo dhul xareedu buuxdoo beerhu ku yaalaan ooy badhaadhi taalaan oogu baaqayaayee
bal maxay udhaafaan xaliyoow ba,aygiyo ku falaan balanbalkaygasaaxiib ibaal qabo sheekada budeediyo baacdeeda fahanteebari hore kalgacalkii boqnuhuu igooyoo igu jaray bilaawee bilantii salaadaa beerkayga dubatoo ubislaaday waa hore baaqigii ka soohadhay barbarkii ka noolaa idmanbaa burburisoo baabacada marisoo baabah kayeeshoo baasiin kudaartee maxaa lagu bakhtii yaa?
DOOKHOW MAXAAD TAHAY ?Diintu waa nolosha idilIyadaa dariiqiyo Dawga Eebbe loo maroDaneheenna oo idilLagu wada daliilshooNaftuna ay ku deggantahay.
Dammiirkay xoraysaaWanaagana ku durkisaaU diiddaa xumaantooyDumaaniino siisaaWelwelkana ka dadabtaaDadnimada qofkoo idilIyadaa u daawo ah.
Dabin kii ku dhacayeeDenbigiisu shidayeeDabku uu ka baxayeeDawgu uu ka lumayeeDoonaaya hilinkanaIstiqfaar dalbay tidhi.
Ninka deeqahaa RabbiDaayinkeen u dhiibeeDaarahana jeexdeeKu dakaamayooy maqalDadka kii itaal daranMar u kuu dansheegtiyoMar xishood daboolabaDoqoni kaa ma garatooWaayahaa dabraayeeHa u diidin waxad kariGacantaa yay duubnaanHa daadaadin gebigeedDabuubteedu way imanHalkii aad ka dalabtiyoDawgii aad ku bixisaySii diyaarso waxad odhan.
Waxba yaan ku daalineOon deelka maansaduIla sii dakaamineAn u dhaafo duluc kale.
Da’da wiil markay tahayWaqti uu dadaaluuWaalidkii daryeeluuDanihiisa gaarka ahUu duurka u galeeDoondoonna kuba jiroInu helo darmaan wacanDumar waa malaayiinMid uun baa la doortaaShuruuddee la daydayi.
Dhayal maaha dulucduyeDookhow maxaa tahayQofkaad dooni waa tumaDocdee baad ka raadiniDaayinkeen siduu raboQofna muu ku daray talo.
Danta aad dhisaysiyoDugsigaad unkaysabaTii dumini inay tahayMaxaa kuu dammaanada.
Denbi maaha xulashaduIn la doono tii wacanOo la diido tii daranDariiqaana laga maroDiintu way bannaysay.
Waqtigani danbee jiraDuni way wareertooDhaqankiina wuu dumayDa’yartuna hallawdooWaxay daba ordaayaanDuul an liinba haynooMaankooda doorshooFool xumo la darisooDiintana xaqira ooDawgii ka lumayooDuunyada an dhaaminHaddii kalese kaba daran.
Isku dariba maayeeBadhbaa diinta haystooCilmigoy dalbaan iyoDanohooda gaarka ahDeganaansho u watooQuraankana daliilshooDariiq wacanna haystooDadaalkoodu adagyahay.
Inta aanad dadab gelinDuco waalid baa reer Darxumada ka dadabteeHa ku diidin HooyiyoAabboo dantaa wadaInay kuu digaanooyDariiq fiican ku tusaanKaa duwaan wixii daran.
Ha ka dayrin taladiyoHalkay taallo dulucdeedWarkoo duuban wada siiQalinka ha ku duugeenIn la dhowro diintooDaacad loo ahaadanaDaayin baa sidaa yidhiMa dood baad ka leedahay.
Labadii is doortina Markay diin wadaagaanWaa ul iyo diirkeedMa xumaado damacoodMa duugoobo xiisuhuDuditaan ma yeeshaanWaxbaa kala dabraayooDambaabkoodu ma badnooKama durugto xaajadu.
Dardaarmoo rasuulkunaDulucdeedii wuxu yidhiDumar waxad ku raacdaanDibadyaalka maaheeDiinteeda weeyaanDoondoonayoow maqal.
Mid kalaaba lagu darayDa’du waa ma dhaafaanNinka dayday ku jiroowDoob uray haddaad tahaySoo daboolay soddon sanoHa doondoonan dhoorrayDabadeed ma gaadhideDuul xun baa asxaab la ahDadkay wada dhegaysaniWay ku doorin gebigaaDuqna yayna sii noqonHooyadaa da’deeda ah.
Garashadu dan weeyeeHaddaad tahay mid dama ooDuruustiisu koobnidaDeelka daalka moodooDaw kastiba ka xidhanyahayHa doonanin aqoonlayDugsiyada u waaweynDibadaha ku yaallanaDam ka siisay cilmigoodMarkay dawga sheegtabaDooddaadu waxay noqonI daadihi iyaa yidhiDuqii reerku waa kumaMa dood bay ka leedahayInay iga danbaysooyDabneheeda iga xidho.
Dadka kii aqoon lihiDebnihiisa kama xidho Dariiquu tilmaamiyoDanta inu tusmeeyeeDeeqana sideedabaU dulqaadan maysooWay difaaci goobteedIsna wuu ka dudiyooDarxumaa markaa iman.
Haddaad tahay danyare dhabaDuunyo buuran haynooDuruuftu ay ku adagtahayHa hantaaqin degganooDadkood aad u ladanyahayDoorka maanta joogiyoMaalintay dunida timidDarxumo aanan aragooDhuunigeed diyaar yahayDabka saarin dheriyooBasarkana ku daranooWaxba weli an loo diranDhulka oo kulayl dubanQaboojiyaha dugsatooDarxumada ku haysanaDuulduul ku maqashooXisaabtana ku darsanaynInay noloshu darantahay.
Ha ka saarin dugsigeedHanfi yuuna dubanineDaawadeeda wejigiyoDiraceed ma goysideU ducee inay heshoMid la doora oo haga.
Murti baa dareentooWaxay tidhi ducaysaneXubi qudha dan moodowHadday soo dillaacdooyDaf tidhaahdo baahiduAlbaabkana ka soo dustoJacaylku ma difaacooWuu diiqadoodaaDaaqadana ka boodaaHaddii aanu diin wadan.
Ha doonanin mid an garanDanta reerku siday tahayWixii daayin siiyanaWada daadinaysooUbadkoo darxumadiyoDullinimo ka muuqatoLa duuduuban gaajanaDuruuc qaadanaysooDayn wada galaysooBiilka ka duwaysooBuuri duubanaysooKu doodaysa lacag keenNamuu deeqin biilkuye.
Adiguna ha daayicinDadka aad horjoogtiyoDuruufta reerka gebigeedU dadaal intaad kariAdigoon dhannaba dayinJaadkaa ha duubanin Ha ka dheeraan daaskiyoMeesha ubadku degganyahayWuxu daayin kugu simoKula toos dabkoodaa.
Haasaawe daranoowSida loo dansheegtaaDariiqyada la mara ooKolba meel dahsoonooDadku aanu u dhowaynIs daadihiya yaa yidhiJidhkeedii daboolnaaInta aanad dadab gelinXaqqa lagama diideeDaaha yaa ka roga yidhiDebnahaaga yaa yidhiDaankeeda quruxda lehDhunkashada ku duugooDoqonniimo awgeedHa is dadabto iyaduna
Magaceedii yaa dilayDariiqyada ayaa dhigayDoqonoow ayaa yidhiFaan ka dhig darxumadiyoDenbigaad ka gashay gabadhWalaashaa la doorooDad ku moodday inad tahay.
Midbaa taa ka sii daranWaalidkii dantaa guudWada daayac tirayeeDawga toosan laga rabayInta loo durbaan tumayDullinimo halka u daranGabadhiisa dahabuuDaranyada ka dhabi jirayIntuu daaman xiiraneIsagoon duqay wadanI ogaada la dalyimidDuurka uu la galayanaSaxeexa ugu duugeeDan sidaa u haystoowDaliilkeed u haysaa.
Marka ay darmaantiiIyo daaman xiiraneCiyaartu ay la durugteeUurka loo daf siiyanaAsturnaan dalbaaydiyoDabool saarka xaajaduDariiqay ku socotaa
Qaadigan ku duugeeQabiltuda la degdegeeMeherka ku daguugaynaKitaabkuu ka daalacayMa diintaa sidaa dhigi.
Marka uu la dadab galoKa dheereeyo daaskoodIsagaa duqiiyeeWaa inuu daryeelaaIyadna ay dadaashaaDuditaanku waa ceebDibad loola soo baxayIswaydiintu waa daneIsweydaarsi baa daran.
Markaad raaxo damacdanaLoxooxdaad dubaysaaYay noqonnin daal iyoDoqontii xanaaqdeeTii ugu danbaysayU dulqaadan waydeeDambaskaa ku tuurtayDuulkeedii kaba naxayDadaalkaa qasaariyoMagac xumo la daristay.
Yay noqonin doontiiMawjadaha ta ugu daranMishiinku uu ka damayeeGurmadkuna ka daba iman.
Yay noqonnin darmadiiDadku wada mahadineeQof qudhuun dantiisa ah.
Dux ma yeesho dherigiiDabkiisa an la sii shidinU diyaari gegadooDisdidana markaa saarHaddii kale way damiyooYeelan mayso damciyooDaaco qudhin bay leedahayIyo daal bilaasheeHa illaawin degganaanIyo debecsanaan suganDeelqaafku yuu badan.
Nadaafadduna waa deeq Diintaba nuskeeda ahSida Daayin sheegayDushaadana sifee gebiQofkaad darmo wadaagtaanAmma deriska kuu ahiYuuna diiqadoonineDenbi baa ku jira taas.
Gabadhyahay darmaantiiGoortaad dibed u bixiyeedDariiqyada maraysanaDushaba ha u soo bixinQuruxdaada doorka ahDabagaab sideediiDaandaansi uun waddaJidhkeed wada dubaaxiniSiyaadana ku sii dariHa ku dayan dhiggeedaa
Debnahaagu yay noqonSida habar dugaagooNeef goor dhow soo dilayDhiig lagu daguugooEegmada u daranooLaga daalalyoonayo.
Siday diintu sheegtayHaybaddaa dabool saarDam ku sii xijaabkooDegganaan iskaga luud.
Markaad daaska joogtanaDiracaa yuun jeexnaanDuug ahaan hugaagubaDuqa raali geliyooDhaayihiisa damac geliDaal buu tirsanayaaDood uun ha kula kicinYuuna diiqadoonineHadal debecsan kula hadal.
Waxkastood dalbaysanaDaayinkeen u dhiib taloIstiqaaro dalab ooKu ducayso inu RabbiDawga kugu hanoonshooDarmaan wacan ku siiyooyDiinteed dhammays tahayDamaceed macaan yahayDuul wacan ka dhalatooBuuriga dudubinnooJaadkana danaynooDaawo aan is marinnooAsal yahay dubkeedoodKu illowdo daalkaadDoobnimo ka dhaxashay.
Said Abib www.maxamedmuuse.8k.com